I-BRHE Wireless Controller ye-PS4/Pro/Slim/PC Accessories
Okwakhelwe ngaphakathi okukabili ukushaqeka okukabili kanye nomsebenzi wenzwa yamandla adonsela phansi, kukunikeza ukudlidliza okuhlukile nolwazi lwegeyimu olungokoqobo.
Ngomsebenzi wokuqhuma kokuchofoza okukodwa kokudubula okuqhubekayo, ungathola ukunemba kokuphokophela okuphezulu nolwazi olungcono kumidlalo ye-FPS esports.
Ihlala amahora angu-8-10 wokusetshenziswa okuqhubekayo namahora angu-2-3 kuphela wesikhathi sokushaja.
Izinti ze-analogi ezimbaxambili nezinkinobho zokucupha zinokusalela okuncane nokuzwela okukhuphukile, ukuze kube nokunemba okuphezulu kokunyakaza.
Iphedi ye-Multitouch ephakathi ikunikeza ukuthinta okwengeziwe kokuhlangenwe nakho kwakho konke futhi ithuthukise amathuba akho okudlala.
Akukho ukubambezeleka, ukubambezeleka noma ukuphazamiseka.Uxhumano lokudlulisela oluzinzile phakathi kwamamitha ayi-10.
Ungasakaza bukhoma igeyimu yakho noma wabelane ngezikhathi zakho zokudlala ngokuchofoza okukodwa.
Izipikha ezakhelwe ngaphakathi kanye nojeke we-headphone we-stereo
Isilawuli esingenantambo sinojeke owakhelwe ngaphakathi wesipikha kanye nojeke wamahedisethi we-stereo, ujeke womsindo ongu-3.5mm unikeza isixazululo esisebenzayo somsindo womuntu siqu sabadlali abafuna ukulalela imidlalo yabo ngasese.
1 x Isilawuli Esingenantambo se-PS4
1 x Ikhebula Lohlobo C
2x Izithupha Zokubamba Izithupha
*Imikhiqizo yezinkampani zangaphandle, hhayi esemthethweni.
*Sicela ushaje kuqala ngemva kokuthola isilawuli.
*Ayikwazi ukudlala imidlalo ye-PS-5.
*Uma kukhona okungalungile ngomkhiqizo, ungasethwa kabusha.Ukuze wenze lokho vele usebenzise ithuluzi elincane bese ucindezela inkinobho yokusetha kabusha engemuva kwesilawuli.
*Ukuze udlale imidlalo ye-PC, udinga ukusebenzisa ikhebula lokushaja ukuze uxhume.
Okwedlule: I-PS4 Wireless Controller, Thuthukisa Isilawuli kude Se-Gamepad Esitshajekayo se-Playstation 4/Slim/Pro Console/PC Game ene-Dual Shock, Touch Pad kanye ne-USB Cable Thumb Grip Cap (Blue)
Olandelayo: Shintsha Isilawuli esine-Wake Up, i-Bluetooth Gamepad ene-Customizable Button Motion Turbo Vibration RGB Light, Isilawuli se-Wireless Pro se-Nintendo Switch/Shintsha i-Lite/PC Games - Thuthukisa ngo-2021
Shintsha Isilawuli Nge-Wake Up, Igeyimu ye-Bluetooth...